News Collection: भट्टराईलाई 'खुट्टा नकमाउन' आग्रह
भट्टराईलाई 'खुट्टा नकमाउन' आग्रह
किरण पुन, काठमाडौं, पुस ४- पार्टी केन्द्रीय समितिद्वारा पारित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दस्तावेजमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई 'खुट्टा नकमाउन' उनका निकटस्थहरूले सुझाव दिएका छन्। बैठक सकिएको भोलिपल्ट शनिबार भट्टराई निवासमा भएको छलफलमा उनीहरूले 'विचार रक्षाका लागि' भन्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
उनीहरूले सम्भव भए तल्लो तहमा पनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्ने र त्यस्तो सम्भव नभए तलसम्म जाने सर्कुलरमा भट्टराईको असहमति पठाउने र प्रशिक्षणमा भट्टराईको विचारमा पनि छलफल गर्न पाउनुपर्ने वातावरण मिलाउन उनलाई आग्रह गरे। उनीहरूले दुई लाइन स्पष्ट भइसकेका कारण आफ्नो लाइनको रक्षाका लागि पनि पार्टी सांगठनिक जिम्मेवारीमा त्यसैअनुसारको हिस्सा माग गर्न भट्टराईलाई सुझाए।
दुई घन्टा चलेको समीक्षा र भावी योजनासम्बन्धी छलफलमा भट्टराई निकट नेताका साथै पूर्व एकताकेन्द्र मसालबाट पार्टीमा आएका ४० जनाजति उपस्थित भएको भट्टराई निकट एक सहभागीले जानकारी दिए।
'विचारको रक्षार्थ तल हामी छौं, तपाईं (भट्टराई) माथि खुट्टा नकमाउनु होला भनेका छौं,' छलफलमा सहभागी एक पोलिटब्युरो सदस्यले नागरिकसित भने, 'विचार रक्षार्थ त्यसैअनुसारको हिस्सा सबैतिर मिलाएर लैजानुपर्छ। नत्र विचारको सेबोटेज हुन्छ।' पार्टीको तल्लो तहसम्म पनि छलफलमा गएकाले भट्टराईको विचार अब पार्टीकै भएको र त्यसलाई जोगाउन उनलाई आग्रह गरे।
उनीहरूले भट्टराईले जसरी नै नोट अफ डिसेन्ट सबैले लेख्ने कि के गर्ने? र भावी दिनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गरे। 'सबैले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्ने स्थिति नभए तलसम्म जाने सर्कुलरमा असहमति पनि जानुपर्छ,' एक सहभागीले भने।
समीक्षामा उनीहरूले अनमिन गएपछि, जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भए मुलुक अस्तव्यस्त हुने आशंका व्यक्त गर्दै स्थिति कसरी सम्हालिन्छ भन्ने चिन्तासमेत प्रकट गरेका थिए। एक सहभागीले छलफलमा उठेका प्रसंग उद्धृत गर्दै भने, 'मुलुक नै कता जाने भन्ने बेला विचारको रक्षामात्र होइन, यी सबै विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। पार्टी निर्णयमा हतारो पो भयो कि?' उनीहरूले नेताहरूलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे।
सहभागीको आग्रह थियो, 'अरू नेता गम्भीर नभए पनि तपाईं (भट्टराई) हुनुपर्‍यो। क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बीचमा बाहेक अन्त मुलुक बिसाउने ठाउँ छैन। फेरि पदाधिकारी, स्थायी र पोलिटब्युरो बैठक बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्‍यो।' उनीहरूले अब हुने विद्रोहमा नरसंहार हुने दाबीसमेत गरे।
'मूल भावनामै असहमति भएपछि अब कसरी पेस हुने भनेर सामान्य समीक्षा र भेटघाट भएको हो,' सहभागी एक पोलिटब्युरो सदस्यले प्रस्ट्याए। उनले लाइन बहुमतकै लागू हुने भए पनि विचार प्रकट गर्न पाइने स्वतन्त्रता हुनुपर्ने बताए। उनले असहमति भए पनि कार्ययोजनामा सहयोग हुने जानकारी दिए।
सहभागीले समीक्षामा पारित दस्तावेज पार्टीको नभई अध्यक्ष दाहालको निजी भएकोसमेत टिप्पणी गरे। दाहालले पालुङटार बैठकमा बैठकको अन्ततिर पढेर सुनाएको प्रस्तावलाई नै आफ्नो प्रस्तावका रूपमा अघि सारेका छन् जसलाई स्थानीयस्तरसम्म छलफलमै नलगिएको टिप्पणी भट्टराई पक्षधरको छ। त्यसलाई सहभागीले पढ्ने, बहस गर्ने कुनै अवसर नपाएको उनीहरूको जिकीर थियो।
'केन्द्रीय समितिले लिने निर्णय त व्यापक छलफल गरेर पो हुन्छ,' समीक्षामा उठाइएको प्रसंग उल्लेख गर्दै एक सहभागीले भने, 'अध्यक्षले पालुङटार बैठकको अन्तमा सुनाउनुभयो। त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा पास भएको भनियो। यो त अध्यक्षको व्यक्तिगत दस्तावेज भयो। बहस र छलफल नै नभएपछि कसरी पार्टीको भन्ने?' एक सहभागीले भने, 'बहसबिनै कोरा कागजमा समर्थन वा विरोध भयो। विधिसम्मत भएन।'
सहभागीहरूले 'विचारधारा' भन्ने पत्रिका कहिले निस्कने हो? ठेगान नभएकाले विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने उपाय खोज्न सुझाए। उनीहरूले पुस महिनामा हुने प्रशिक्षणमा भट्टराईको विचार पनि लान पाउने गरी मिलाउन उनलाई आग्रह गरे। भट्टराई निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'भट्टराईको असहमति छ भन्ने कुराको छलफल तलसम्म पनि प्रशिक्षणमा जाने गरी मिलाउनु पर्छ। कसैका विचारलाई थुनछेक गर्न हुन्न, हामी एक्काईसौं सदीमा छौं। सभ्यताको परिचय दिनुपर्छ।'
उनीहरूको भनाइ थियो, 'विचारमा अंकुश लगाउन पाइँदैन। नत्र त हामीले स्टालिनको ३० प्रतिशत गल्ती भनेर समीक्षा गरेको अर्थ नै रहेन नि।' शुक्रबार केन्द्रीय समितिले पार्टीभित्रका फरक मतलाई विचारधारा नामक आन्तरिक पत्रिकामा मात्र बहस गर्ने निर्णय गरेको छ।
उनीहरूले पार्टी अनुशासनबाहिर नजाने, पार्टीका गोप्य कुरा सार्वजनिक नगर्ने, नेतालाई गालीगलौज नगर्ने र विशुद्ध वैचारिक बहसमा जाने बताए। कम्युनिष्ट पार्टीमा बहुमतको कुरा लागू गर्ने र बहसमा दुई लाइन र कार्यरुपतामा एक हुने परम्परालाई लागू गर्ने बताए।
उनीहरूले पार्टी जिम्मेवारीमा आफूहरूको समूह ठगिएको तर्क गर्दै योग्यताअनुसाको भूमिका पाउनुपर्ने गरी पेश हुन भट्टराईलाई आग्रह गरे। एक सहभागीले भने, 'भूमिका नपाएको हाम्रै लाइनमा छन्। सबैले आफ्नो क्षमताअनुसारको भूमिका पाउनुपर्छ। हामीले नयाँ स्थितिमा नयाँ खाले कार्यभार योगदानअनुसार पाउनुपर्छ।'
भट्टराईले पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। उनले विद्रोह गर्ने वा नगर्ने विषयमा नभई बहस कुन बिन्दु टेकेर जनविद्रोहमा जाने भन्ने विषयमा भएको तर्क गर्दै आफूले छलफल गर्ने बताएका थिए। भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले भने, 'शान्ति र संविधानमा टेकेर वा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा टेकेर भन्ने विषय बहस हो। भावावेशमा आएर करकापमा गलत निर्णय गर्न हुन्न। त्यो इतिहासप्रति नै मजाक हुन्छ।' उनले पार्टी एकतालाई जोड दिँदै भनेका थिए, 'पार्टी मात्र होइन मुलुक कुन विचार र कसरी सम्हाल्ने भन्ने छ। छलफल गर्छौँ।'
समीक्षामा उनीहरूले अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन बैद्यको मिलनलाई 'स्वाभाविक' बताए। दाहालले खरिपाटी बैठकमा बैद्यको दस्तावेजसँग मिलाएर पारित गरिएको थियो। त्यसयता दुई वर्षसम्मको छलफलबाट उनीहरू एक भएको भट्टराई निकटहरूको तर्क थियो।
छलफलमा सहभागीले आफूहरू भट्टराई गुटका मात्र नभई पार्टी उपाध्यक्षको रुपमा भेटघाट गरेको बताए।
पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारीमा भट्टराई एक्लै छन् भने स्थायी समितिमा टोपबहादुर रायमाझी छन्। कुनै बेला एउटै पार्टीमा काम गरेका अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेल भने खुलेर उनीतिर नलागेको स्रोतको भनाइ छ। पोलिटब्युरोमा हिसिला यमी, राम कार्की, देवेन्द्र पौडेल, भीमप्रसाद गौतम, नवराज सुवेदी छन्। केन्द्रीय समितिमा डोरप्रसाद उपाध्याय, भक्तिप्रसाद पाण्डे, प्रभु साह, गंगा श्रेष्ठ, वामदेव क्षेत्रीलगायत छन्।